3BR Indlu Esemaphandleni Ehlaziyiweyo Kwingingqi YeGrampians - I-Airbnb
3BR Indlu Esemaphandleni Ehlaziyiweyo Kwingingqi YeGrampians
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguVictoria
Igumbi lokulala elihle nelitofotofo elisandul 'ukulungiswa kunye nendlu esemaphandleni eneyadi enkulu ngasemva. Ikhitshi negumbi lokuhlambela elilungiswe ngokupheleleyo. Indlu yethu encinci entle ikwisigamu seyure xa usuka kwiGrampians National Park ibe uhamba nje imizuzu eyi-10 ukuya kwiArarat Town Centre.
I-Ararat yidolophu encinci yasemaphandleni eneemuvi, iimyuziyam, i-Kmart, i-Alexandra Park entle kunye neevenkile zekofu ezintle, iivenkile zezinto ezibhakiweyo kunye neevenkile zokutyela. Nceda usityelele uza konwabela umoya omtsha kufutshane neentaba, ukuzola nokuphumla.
Ilungiswe ngokupheleleyo i-2Bd + Indlu etofotofo kwindawo enkulu yokuhamba imizuzu eyi-10 ukuya kwi-Ararat Town Centre. Le ndlu inamagumbi okulala amabini anebhedi elala abantu ababini kunye nenkqubo yokufudumeza/yokupholisa. Igumbi elinye elinebhedi enye nento eyenza kufudumale. Kunye negumbi lokuphumla elinesofa esongwayo yeendwendwe eziyi-2 kunye nenkqubo yokufudumeza nokupholisa. Kukho ii-donas neengubo ezingakumbi kwikhabhathi. Zonke izinto zebhedi neetawuli ziyafumaneka. Kukho yonke into oyifunayo kule ndlu. Kukho nekhothi esongwayo ukuba iyafuneka. Izilwanyana zasekhaya eziqeqeshiweyo zamkelekile. Iyadi engasemva inkulu kakhulu, ibiyelwe ngokupheleleyo kwaye inomngxuma omncinci womlilo nemithi yeziqhamo. Le ndlu ikwisitrato esibonisa iintaba. Ipholile kakhulu kwaye ipholile kakhulu. Ayikho i-intanethi kumnyango olandelayo iinkukhu zommelwane kunye nenkungu yasezintabeni. Ikwimizuzu eyi-30 kuphela xa usiya kwi-Grampians.
4.53 · Izimvo eziyi-30
Indawo esedolophini enomoya oqaqambileyo kunye neNtaba. Izolile kwaye ithule kakhulu. Abamelwane banobubele kakhulu (xa ubabona, nto leyo engafane yenzeke.)